ဖြတ်လမ်းမှ ဒုစရိုက်မှုပြုပြီး ရှာစားကြသူ ခါးပိုက်နှိုက်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Environment » ဖြတ်လမ်းမှ ဒုစရိုက်မှုပြုပြီး ရှာစားကြသူ ခါးပိုက်နှိုက်များ
ဖြတ်လမ်းမှ ဒုစရိုက်မှုပြုပြီး ရှာစားကြသူ ခါးပိုက်နှိုက်များ
Posted by etone on May 21, 2012 in Environment, My Dear Diary, Short Story | 25 comments
etone ဘ၀ တစိတ်တပိုင်း ခါးပိုက်နှိုက်သတိပြု
နာလည်း ရန်တုန်လာရင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်လာရမယ်
ကားစီးရင် ထောက်လန်းရေးကြောက်ရ ရှေ့ပွတ်နောက်ကပွတ်တဲ့သူတွေကိုလည်းကြောက်ရ
ကျုပ်လဲ ဘတ်စ် စီးရမှာ ခပ်လန့်လန့်တောင်ဖြစ်ချင်လာပြီ….
အငှားကားစီးရအောင်လဲ ကားပိတ်မှုတွေကို လက်ညိူးထိုးပြီး တက္ကဆီခ ပိုတောင်း
လက်မရွံရဲဘော် ကိုဘလူးသာ ရှိလို့ ကတော့ အေလဘေးခါးပိုက်နှိုက်တွေ ငါးပါးမှောက်မှာ မြင်ယောင်သေးတယ်
ဒါနဲ့အဲဒီရဲဘော်လဲ ရွာထဲ မလာတာအတော်ကြာပေါ့ဗျား..
ဟမလေး ကိုဘလူးရဲ့….အခုဒေါ့ နိုင်ဂံဂျား ဒိုးသွားပြီး ကျုပ်ဒို့ ကို မေ့နေပါရော့လားဗျ
ဘယ်သွားသွား သတိနဲ့သွားလာကြပေရော့ ရွာစားတို့ ရေ့
အူးဗိုက် နဲ့ မောင်ကမ်း ကို ဘော်လီကပ် ငှားလိုက်တာဘဲ ။
အဟီး .. ကိုပေ …
ဗလတောင့်တောင့် ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့်တွေမို့ …. . ဘော်ဒီဂတ်ငှားလိုက်တယ်ပေါ့ … ။
အင်. ခေတ်ပျက်မှာ ခိုးစား လုစားတွေပေါလာနေပီ။
ခါးပိုက်နှိုက်တွေကတော့ ခုတလောတော်တော်သောင်းကျန်းလာပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေတောင်တန်း
တူရင်ဘောင်တန်းပြီး အလုပ်လုပ်နေတဲ့ကာလမှာခါးပိုက်နှိုက်နေတဲ့ ကောင်တွေမရှက်ကြဘူးလားမသိ
ဘူး။ သူတို့ကအုပ်စုဖွဲ့ပြီး ဓါးပြဆန်ဆန်ကျူးလွန်နေကြတာ ။ ပြီးတော့ခါးပိုက်နှိုက်တဲ့သူတွေကို ကြည့်
လိုက်ရင် အားလုံးသန်သန်မာမာချည်းပဲ။ ကိုယ်တိုင်လုပ်စားရင်ထမင်းမငတ်နိုင်တဲ့ အင်အားကိုပိုင်ဆိုင်
ထားတဲ့သူချည်းပါပဲ။ သူတို့အဓိကပစ်မှတ်ကလည်း ကိုယ်တိုင်ရိုးရိုးသားသားရှာဖွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့မိန်းမ
သားတွေဆီက နှိုက်တာများပါတယ်။ ခါးပိုက်နှိုက်တွေကိုဖမ်းမိရင် ထောင်ဒဏ် နဲလေးဆယ်နှစ်လောက်
ချသင့်တယ်။ ငပျင်းတွေမို့ သိပ်မုန်းတယ်။
ခါးပိုက်နှုိက်လိုမသမာသူတွေခေါင်းထောင်လာတာ သူတို့ကို အကာအကွယ်ပေးသူ ရှိနေလို့ပေါ့ဗျာ။
အမျိုးသမီးများလဲ ရင်ဘောင်တန်းပြီး ခါးပိုက်နှိုက်အလုပ်ဖြင့်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပညာသည်လို့ခေါ်တဲ့ လက်သမား၊ ပန်းရံ
ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး လုပ်အားခ ၄၀၀၀ ဝန်းကျင်ပါ။
၄၀၀၀ ဆိုသောငွေစဖြင့်မိသားစု ထမင်းစားလောက်ငသော်လည်း
ဘဝရှေ့ရေး ထည့်တွက်ဖို့ရာကား ခက်ခဲလေ၏
နှစ်စဉ် တက္ကသိုလ်များစွာမှ ဘွဲ့ရလူငယ်မောင်မယ်များစွာ မွေးထုတ်နိုင်သော်လည်း
ထိုလူငယ်မောင်မယ်များအတွက် အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးပေးနိုင်မှုမရှိ
လက်ဝယ်ကိုင်ဆောင်ထားသော ဘွဲ့လက်မှတ်များမှာ နိုင်ငံတွင်း၌ပင်
အောင်ထောက်ပံ့မှုမရသူများ ဘွဲ့တစ်ခုနှင့် မတန်မရာအလုပ်လုပ်ရပေတော့သည်
အလုပ်သမားများအတွက် အခွင့်အရေးစောင့်ရှောက်ခြင်းမရှိသော နိုင်ငံဖြစ်သောကြောင့်
ရည်ရှည်မမြဲသော ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ ရေကြည်ရာမျက်နုရာရှာရင်း
နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းများနှင့် မြန်မာ့ဘီလျံနာများအားလုံး ပိုင်ဆိုင်ထားမှုများမှာ
အချောင်လမ်းမှကြွယ်ဝမှုများသာဖြစ်သဖြင့် အချောင်လမ်းလိုက်ရန် လူငယ်ထု အိပ်မက်မက်
ငွေသားကိုင်သုံးစွဲစရာမလိုသော အဆင့်မြင့်ဘဏ်စနစ်ရှိရန် လိုအပ်
မောလိုက်တာ အဲဒါတွေပြင်နိုင်ရင် ခါးပိုက်နှုက်တို့သခိုးတို့ ရာခိုင်နှုန်းအများကြီးလျော့သွားမယ်
အလွယ်လမ်းလိုက်တဲ့ မိန်းမ ခါးပိုက်နှိုက်တွေလည်း…. ရှိနေတာ ဟုတ်ပါတယ် ။ ဒါ့ပြင်ကလေးခါးပိုက်နှိုက်တွေ ရှိကြောင်းလည်း ကြားခဲ့ရတယ် … ။ အခုလို .. အုပ်စုလိုက် နှိုက်တာမျိုးရယ် ၊ ဓါးဆောင် လာတာမျိုးရယ်ကျတော့ .. ဘယ်လိုပြောရမလဲ .. အနုကြမ်းစီးတဲ့ ဘက် ဆန်ဆန် ဖြစ်သွားပြီ ။ ဒါမျိုးတွေကိုမှ …. ရဲတွေ သေချာ မကိုင်တွယ် ၊ ဖြိုခွင်းလျှင် …နောက်ပိုင်း လမ်းလည်ခေါင် လုယှက်တာတွေ ထိပါဖြစ်လာနိုင်တယ် ။ ဗဟိုစံပြငါးဈေး(ကြည့်မြင်တိုင်)ဘက်များ ညဉ့် နက်တဲ့ အချိန်နဲ့ ..ဝေလီဝေလင်း မဖြတ်ရဲဘူး ။ ဒါ့ပြင် အခု အသစ်ပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့ သီရိမင်္ဂလာဈေး (ပိတောက်ချောင်း) နားလည်း … လက်ရဲ ဇက်ရဲတွေများလို့ … သွားရတာ ကျောချမ်းတယ် .. ဒီလိုပြောလို့ တရားဥပဒေမစိုးမိုးတာ မဟုတ်ဘူးနော် … လူမိုက်တွေချည်း နေတာလည်း မဟုတ်ဘူး …ဆိုလိုတာက အခြေခံကာယလုပ်သားအများစု ရှိတဲ့နေရာပါ ။ သူတို့တွေခွန်အားကိုသုံးပြီး အလုပ်လုပ်ကြပါတယ် ဒါကြောင့် ပင်ပန်းမှုကိုဖြေဖျောက်ဖို့ အရက်သောက်ကြတယ် …တော်ရုံသောက်တာမဟုတ်ပဲ … မူးပြီး .. ထုံနေအောင်သောက်ကြတာပါ .. အဲ့ဒီအချိန် စိတ်က အလိုလို ကြွနေပြီး ဆင်ခြင်တုံတရားမဲ့က … မျက်စိထဲ ကိုးလို့ ကန့်လန့် မြင်တာနဲ့ .. ရန်လုပ်တတ်၊ ရန်စတတ် လို့ပါပဲ ။ ကိုယ်က သည်းမခံပဲ ထိပ်တိုက်တိုးမယ်ဆို …. ဒုစရိုက်မှုဖြစ်နိုင်တဲ့ နေရာမျိုးမို့ပါ ။
တက္ကသိုလ်တွေက ဘွဲ့ရတွေ ထုတ်ပေးနေတာ ဟုတ်ပေမယ့် … တကယ်သင်လာတဲ့ ပညာ လက်တွေ့ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နိုင်ရဲ့လားဆိုတာလေး ….ပြန်တွေးမိပါတယ် ။ဒါသင် ဒါကျက် ဒါဖြေဆိုတဲ့ စနစ်မျိုးထက် .. လုပ်ငန်းခွင်ဝင်လို့ ရအောင် သင်ကြားမှု ပိုင်းပေးရမယ် … ဒီလိုပါပဲ ..ကျောင်းသားတွေဘက်ကလည်း … တက္ကသိုလ်ပြီးမြောက်ဖို့ အတွက် စာသင်တယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ထက်ပိုပြီး .. သင်လာတဲ့ ပညာ …. အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှာ ၀င်ဆံ့နိုင်ဖို့အတွက်ပါ ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ် ။ ကျွန်မတို့တွေ … သင်တန်းတွေ မှိုလိုပေါလာတုန်းက လျှောက်တက်ဖြစ်တယ် .. တကယ်တမ်း လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရော … အဲ့ဒါတွေ နဲ့ … သိပ်ကီးမကိုက်တော့ဘူး … ဒီတော့မှ လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ ဆက်စပ်တာမျိုး … အလုပ်လုပ်ရင်း ပြန်သင်ယူရတယ် … ။ အဆက်သွယ်နဲ့ မို့ အရည်ချင်း မပြည့်ဝလည်း အလုပ်တစ်ခုရခဲ့တာ ကိုယ်တွေ့ပါ … ကိုယ့်အရည်ချင်းနဲ့ကိုယ်သာ အလုပ်ရှာမယ်ဆိုလျှင် .. ကျွန်မအခုထိ စီဗွီကိုင်ပြီး … ကုမ္ပဏီပေါင်းစုံလှည့်နေရမှာပါ … ။ လူငယ်တွေကလည်း … ကိုယ်သင်တန်းတကာလှည့်တက်လို့၊ စာတီဖီကိတ် တစ်ထပ်ကြီးရထားလို့ ….. ပညာစုံပြီဆိုပြီး ထင်ချင်ထင်နေကြလိမ့်မယ်.. တကယ့်လုပ်ငန်းခွင်ထဲဝင်တဲ့အခါ .. အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မဖြစ်ကို မတွေးပဲ .. ငါဒီလောက် တက်ထားတာ .. ဒီလစာနည်းတယ် အဆင်မပြေဘူးဆိုတာမျိုးတွေ တွေးပြီး … အလုပ်ခုန်ချင်လာကြတယ် … ။ ဒီတော့ … ဟိုကူး ဒီကူးနဲ့ ကြားထဲက မျောက်သစ်ကိုင်းလွတ်သလို ဘယ်နေရာ ဘယ်ဌာနမှာမှ နေရာ အတည်တကျမရ ၊ ကျွမ်းကျင်မှုလည်း မရှိပဲ …. အသစ်အနေနဲ့သာ အလုပ်လုပ်ကြရပြန်တယ် … ။
အလုပ်သမား အခွင့်ရေး စောင့်ရှောက်မှု ရှိမရှိတော့ မဝေဖန်ရဲပါဘူး … ဒါပေမယ့် အလုပ်သမား ၀န်ကြီး ဌာနဆိုတာကတော့ ရှိပါတယ် ။ အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနက လူတွေ လည်း .. အလုပ်သမားတွေကို တကယ်နားလည်ပြီး … (အလုပ်ရှင်လာဘ်ထိုးတာမယူပဲ) အလုပ်သမားနဲ့ အလုပ်ရှင်ကြား ၊ လုပ်ငန်းခွင်ကြား အခြေနေတွေကို … အမှန်တိုင်း ပြေလည်အောင် ကူညီပေးသင့်တာမျိုးပါ ။ (ဥပမာနော်) အလုပ်သမားတွေဘက်က ဆောင်ရွက်ရမယ့်အစား … အလုပ်ရှင်တွေဘက်က လိုင်နေလျှင်တော့ .. ကျားကြောက်လို့ .. ရှင်ကြီးကိုး … ရှင်ကြီးကျားထက်ဆိုး ဆိုသလို ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် … ။
ငွေသားမကိုင်ပဲ သုံးလို့ ရတဲ့ ဘဏ်စနစ်ကတော့ လိုအပ်ပေမယ့် ….ဝေးသေးတယ် ။ ဒီမှာက … ဘဏ်ဆိုလျှင် …. လူချမ်းသာအများစုနဲ့ .. မရှိမရှား လူတန်စားအနည်းကျဉ်းလောက်သာ ပတ်သတ်ပြီး ၊ ဘဏ်တစ်ချို့ရဲ့ … ကာစတန်မာအပေါ် ဆက်ဆံရေးသိမ်ဖျင်းမှုတွေ ၊ စောင့်စားချိန်ကြာမြင့်မှုတွေကလည်း ရှိသေးတော့ .. အဆင့်မြင့်ဘဏ်စနစ်ဆိုတာအတွက် ..အ ချိန်ယူပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ် ။ ဘဏ်ကို လူတိုင်းသွားဖို့ လက်လှမ်း မမှီသေးတဲ့ အနေထားကလည်း … အကြောင်းပြချက်တစ်ခုပေါ့လေ … အခုတောင် ipay စနစ်နဲ့ ကားစီးလို့ ရပေမယ့် … … တစ်ကဒ်ကို လူတစ်ယောက်စာပဲ ပေးလို့ ရတာမျိုး ၊ တစ်ခါပေးပြီး ရှစ်မိနစ်ကြာမှ နောက်တစ်ခါ ပြန်ပိုက်ဆံဖြတ်လို့ ရတာမျိုးတွေကြောင့် … သိပ်မတွင်ကျယ်သေးဘူး ။ ဒါတောင် … ကားလမ်းပို့ဆောင်ရေးတင်မကပါပဲ … ရထားနဲ့ သဘောင်္တွေမှာပါ … အိုင်ပေးစနစ်သုံးဦးမယ် သတင်းကြားနေတယ် … ဟီး
ခါးပိုက်နှိုက်အတွက်ကတော့ …. လာဘ်မစားတဲ့ ဥပဒေ၀န်ထမ်းတွေရယ် ၊ တင်းကြပ်တဲ့ တရားဥပဒေရယ် .. ခပ်တင်းတင်းသာဆွဲပစ်လိုက်စမ်းပါ ….. သိသိသာသာကြီး … ခါးပိုက်နှိုက်ရန်အေးသွားမယ် … ။
အားလုံးသတိ ထားကြဘို့ သတိပေးတဲ့
ပို့စ်တင်သူ ဒေါ်အီးတုံး အားကျေးဇူးတင်မိပါ၏။
အောင်မလေး ဖြဲသီးရယ် … နီကပဲ ထောက်လှမ်းရေးကြောက်သေးသတဲ့… အဟိ ။
နောက်တစ်ခါ ရန်ကုန်လာလျှင် အစ်မနွယ်ပင် အဒေါ်ဟိုလက်မြန်တဲ့ …အန်တီကြီးကို အကူညီတောင်းပြီး ကားစီးပါဗျို့ … ။
ဟုတ်ပါရဲ့ … Gipsyပြောတာလည်း မှန်တာပဲ ။ ..ကိုယ်ပိုင်ကားမ၀ယ်နိုင်သေးသရွေ့တော့ ဘတ်စ်ကားတလှည့် ၊ တက္ကစီတလှည့်ဝဋ်က မကျွတ်နိုင်သေးဘူး .. ခရီး နီးလျှင်တော့ .. အချိန်ပေးပြီးပဲ လမ်းလျှောက်သွားတာ …. ကျန်းမာရေးတောင် အထောက်ကူပြုသေး .. ဟီးဟီး
ဗိုက်ကလေးရေ … တို့ ရွာထဲက ဘီလူးဂျီး ခြင်္သေ့တပိုင်းငါးတပိုင်း သတ္တ၀ါကြီးခြေရင်း သွားသွားစောင့်နေ့ရတာနဲ့ …. ဒီခါးပိုက်နှိုက်တွေ သောင်းကျန်းချင်တိုင်း သောင်းကျန်းနေတာ ဖြစ်မယ် … ။ သူ့လို ခါးပိုက်နှိုက်ဖမ်းတာက .. ကားကြပ်တဲ့ အချိန်ဆို သိပ်မလွယ်ဘူး …. ။ သူရေးပြခဲ့တဲ့ ခါးပိုက်နှိုက်ဖမ်းတဲ့ ပို့စ်ဖတ်ပြီး … ရယ်လိုက်ရတာလေးတော့ … အမှတ်ရနေမိတယ် … ။
နာဂရချစ်သူရေ…ခေတ်ပျက်မို့ ခိုးစား လုစားတွေ ပေါလာပြီ ဆိုသလိုပါပဲ … စိတ်ဓါတ်တွေ ညံ့ဖျင်းနိမ့်ကျလာလို့ ….ပေါလာတာလို့လည်း ပြောလို့ ရတယ် … ဘယ်နှယ့်တော် … သူတို့မို့လို့ … အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျ အချောင် လိုချင်ကြတယ် … သူတပါး ချွေးနည်းစာလေးကို … ။
မေဖလားဝါးစ်ရေ …. ခါးပိုက်နှိုက်တွေက လူသာ ကြံ့ခိုင်တာ စိတ်ဓါတ်အားဖြင့် ကြံ့ ခိုင်မှုမရှိဘူး …နိမ့်ကျ ခြစားနေတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ ပေါ့ပေါ့နေ ပေါ့ပေါ့စား ၊ ခိုးယိုးစားဖို့ပဲ စိတ်ဝင်စားတာ ….. ။ ကိုယ့်လုပ်ရက်ကိုယ်ပြန်မသုံးသပ်တော့လည်း .. ရှက်စရာလို့ မမြင်ဘူး ထင်ပါရဲ့ ….
လေးပေါက်ရေ .. မှန်လိုက်တာ .. ကွက်တိပါပဲ … ။
ဥပဒေ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချပြီး … မကိုင်တွယ်ခဲ့လို့များ … ခိုးစားဝှက်စားသူတွေ ပိုများလာသလားနော် …. ။ ခိုးစားဝှက်စားတာက … လူသတ်မှုလောက် အပြစ်မကြီးလေးဘူးဆိုပေမယ့် … စာရိတ္တပျက်ပြားစေတဲ့ အလုပ်ဖြစ်လို့ ….ကြီးလေးတဲ့ ဥပဒေမျိုး မချလျှင် နောက်တစ်ခါ ပြန်ကျူးလွန် နိုင်တာမျိုးပါ ။ တစ်ချို့ ခါးပိုက်နှိုက်ဆို …ထောင်ထဲဝင်လိုက် ၊ ပြန်ထွက်လိုက် ၊ ပြန်ဝင်လိုက်နဲ့ ပဲ …. သံသယာလည်နေလေရဲ့ … ။ ဥပဒေရဲ့ အဆုံးမကို ခံပြီး ထွက်လာတဲ့ လူတွေ … တကယ်ဆို … အချောင်စိတ်ပါ ပျောက်သွားခဲ့ရမှာ … ။ အခုတော့ လွတ်လာလျှင် ပြန်လုပ်စားမယ်ဆိုတာတွေကလည်း ရှိပြီး ၊ ထောင်ထဲမှာ လက်ရဲ ဇက်ရဲ နေခဲ့သမျှ … အပြင်က ပြည်သူတွေအပေါ်ဒုစရိုက်မှု ကျူးလွန်တာမျိုးလည်း … လုပ်နိုင်သေးရဲ့ …. ။ စံနမူနာအနေနဲ့ … စာရိတ္တပိုင်း ချိုးဖောက်တဲ့ ၊ မသမ္မာမှုတွေကို …ပြင်းထန်စွာ အရေးယူသင့်တယ် ။
ဦးမိုက် …ရွေတိဂုံဘုရားပေါ်က ဇာတ်လမ်းလေး တင်ပါဗျို့ .. ဟိဟိ
မမအိတုံရေ သတိပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါနော ..
သူခိုးတော့ခြံထဲဝင်ဖူးတယ် အဲဒီအကြောင်း အားရင်ပြောပြမယ်
home alone နောက်တစ်ကားတောင် ထပ်ရိုက်လို့ရတယ် သိလား
ပို့စ်ရှင် အိတုန်ကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်…
တစ်ခါမှ ခါးပိုက်နှိုက် မခံရသေးပေမဲ့ သတိဟူသည် ပိုသည်မရှိပါ ကို ဒီပို့စ် ဖတ်ရင်းအသိဝင်မိပါသည်…
ရွာသူားများ အားလုံး ခါးရန်မှ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ…
ခါးပိုက်နှိုက်ခံရတာတောင် နားလည်ပေးပြီး စိတ်အေးချမ်းမှုကို ယူနိုင်တဲ့
မိုးဇက်လေးရေ … ခါးပိုက်နှိုက်နဲ့ သူခိုး ခိုးတာချင်းအတူတူ … လူကြားထဲမှာ .. နှိုက်တဲ့ ခါးပိုက်နှိုက်ထက် .. အိမ်ထဲ ၀င်ခိုးတဲ့ သူခိုးက ပိုပြီး အန္တရာယ်များမလားပဲနော် … ။ အိမ်တွင်းမှာ တစ်ယောက်ထဲ ရှိနေချိန်ဆို .. လိုချင်တာ မရတဲ့အခါ … သူခိုးက ဓါးပြလည်း ဖြစ်သွားနိုင်တာပါပဲ … ။ သူခိုးခြံထဲဝင်တာကို ဘယ်လို ကာကွယ်လိုက်သလဲဆိုတာလေး သိချင်လို့ … မိုးဇက်ရေးမယ့် ပို့စ်လေးကို ဖတ်ဖို့ မျှော်နေပါတယ်နော် ….
မမွန်ကစ်ရေ … ခါးပိုက်နှိုက်သွားပြီဆိုကတည်းက ပြန်ရတတ်လေ့မရှိတာမို့ … ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ် ခါးပိုက် အနှိုက်မခံရအောင်ပဲ ကာကွယ်ရတော့မယ် … ။ ဒီတော့ … ကားပေါ်ရောက်တာနဲ့ ..ဥစ္စာခြောက်လို ကိုယ့်အထုတ်ကိုယ်ပိုက်ပြီး .. ခေါင်းကို သုံးရာ့ခြောက်ဆယ်ဒီဂရီ တစ်မိနစ်ဆယ်ခါလောက်လှည့်ပေးရမယ် (နောက်တာပါ )
အန်တီအိရေ .. အဆိုးမြင်နဲ့ .. အကောင်မြင် …. အဲ့ဒီလိုလေးတွေကွာတာပေါ့လေ … ကျွန်မသာ … သံဝေဂမရပဲ ဒေါကီးပြီး မေတ္တာပို့လိုက်မယ့်ဖြစ်ချင်း .. ဟီးဟီ
အလုပ်ကိုင် အခွင့်လမ်းရရှိနိုင်ခြေ နည်းလို့လား ၊ လက်ကြောမတင်းတဲ့ လူတွေများလို့လား ၊ သတ်သတ်မှတ်မှတ် အလုပ်မလုပ်ချင်ပဲ အလုပ်ခုန်ချင်သူတွေ များလို့ပဲလားမသိဘူး … အလုပ်လက်မဲ့တွေ များသည်ထက်များလာတယ် …. ။ ဟင်း…ကျတော့်အမြင်တော့ လုပ်ခလစာ(home take) နည်းလို့ ပိုရနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရှာရင်းနဲ့ပဲ လူတွေအလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေတာထင်တယ်၊ တခြားဒီထက်အခြေခံကျတဲ့အချက်တွေလည်းအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ၊်
ခါးပိုက်နှိုက်ကိုတော့ သတိထားရမယ်၊ ဘတ်စ်ကားတွေက ပိုပိုကျပ်လာတယ်။
တကယ်တော့ ရဲနဲ့ခါးပိုက်နှိုက်ဆိုတာ ဝေစားမျှစားလို့ကြားဖူးတယ်
etone ရေ တကယ့်ကို သတိထားရမယ့် အချက်တွေပါပဲ ..
နွယ်ပင်လည်း ကားပေါ်မှာ ခါးပိုက်နှိုက်ခံရဖူးတယ် အဲဒီတုန်းကဆို
ကားကလည်း ချောင်ရက်နဲ့ ကားပေါ်ကဆင်းကာနီးမှ အနောက်ကနေတိုးဆင်းသလိုလိုနဲ့
အိတ်ကိုခွဲပြီး ယူသွားတာလေ .. ကိုယ်ကလည်း အနောက်ကအရမ်းတိုးနေတယ်ဆိုတော့
သတိထားပြီလှည့်ကြည့်မိပင်မယ့် တိုးနေတာက မိန်းကလေးဆိုတော့ သတိမထားလိုက်ပဲ
ဒီအတိုင်းဆင်းလိုက်မိတယ် ကားအောက်ရောက်တော့မှ ဘာရယ်မဟုတ်ဘဲ လွယ်ထားတဲ့အိတ်ကို
ကြည့်လိုက်တော့ ပိုက်ဆံအိတ်ကပါသွားပြီ အဲတုန်းကဆို ကိုယ့်ပိုက်ဆံက (20000) ကျော်လောက်ပါသွားတယ် နောက်ပြီး သူငယ်ချင်းက သုံးမိမှာဆိုးလို့ဆိုပြီး အတ်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံ (15000) လည်းပါသွားတယ်လေ အဆိုးဆုံးကတော့ မှတ်ပုံတင်နဲ့ ကန်တော်ကြီး မန်ဘာကတ်ပြားလေးပါသွားတာပါပဲ ….
အီတုန်းရေ ကိုယ့် ကို ကိုယ် သတိထားတာ ဘယ်တော့မှ မမှားဘူးရယ်။
အမ ဆိုလည်း ဘက်စ်ကားစီးရင် ဥစ္စာ အရမ်းခြောက်တယ်။ ကိုယ့် ဘေး နားရှိသမျှ ယောက်ျား၊ မိန်းမ အားလုံးကို သတိထားပြီးတော့ ကို နေတာ။ တခါမှ ခါးပိုက်နှိုက် မခံရ ဖူးဘူး။ ထောက်လှမ်းရေးလည်း မခံရဖူးဘူး။ ယောက်ျား တယောက် အနားနားမှာ လာတိုးတာနဲ့ ဒေါက် ဖိနပ်နဲ့ ဦးအောင် တက်နင်းပစ်တယ်။ ပြသနာ ရှာရင်တော့ အာဗြဲနဲ့ ကပ်ကပ် လန် ပြန်ရန်တွေ့ ပစ်လိုက်တယ်။ နောက်ပြီး စပယ်ယာတွေနဲ့ ခဏခဏရန်ဖြစ်ရတယ်။
လက်ကြော မတင်းတာ လည်းပါ စားဝတ်နေရေးလည်းပါ
ဆောင်းပါးက ကောင်းပါတယ် ။ အားပေးပါတယ် ဆရာမ။
ခါးတွေက အမျိုး သမီးရော အမျိုးသားပါရှိနေတယ် သတိ ဆိုတာ ပိုသည် မရှိ
ကိုအညာတမာရေ … ဟုတ်ပါတယ် ..တခြား အခြေခံကျတဲ့ အချက်တွေ အများကြီးကျန်ပါသေးတယ် .. ဒါပေမယ့် .. နှာနည်းနည်း စေးနေလို့ .. ဟီး ဟီး
ဒီရက်ပိုင်း ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလေးတွေ ရေးအဲ …. ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်တဲ့ ကြားက .. နှာစေးနေပြန်ပြီ … ။ .
ဖြဲသီးပြောသလိုလည်း ကြားဖူးတာပါပဲ(ကြားဖူးတယ်ပြောတာနော် ..ဟုတ်မဟုတ်သိဘူး ) .. ခဏခဏ .. စခန်းရောက်နေတော့ … သူတို့ မျက်မှန်း တမ်းမိကြလေသတည်းပေါ့ .. ဟိ
အစ်မနွယ်ပင်ရေ… ဘက်စ်ကားပေါ်က အနားကိုကပ်လာတဲ့သူတိုင်း ကိုယ့်ဆွေးမျိုးသားချင်း ၊ သူငယ်ချင်းမဟုတ်လျှင် … ဘယ်သူ့ကိုမှ ယုံလို့ မရတော့ဘူး ….. ဒီတော့ ..ညီမအပေါ်မှာရေးသလို .. တမိနစ်ကို ဆယ်ခါ ခေါင်း သုံးရာ့ခြောက်ဆယ် ဒီဂရီရမ်းပါ …
အစ်မမိုချိုရေ .. ဖတ်ပြီးပြုံးမိတယ် .. ညီမလည်း အရင်က အဲ့ဒီလို လူမျိုးပေါ့ … ။ အခုတော့ .. စိတ်တိုတတ်တဲ့ အကျင့်ကို ဖျောက်ပြီး … အရာရာကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကြည့်တတ်ဖို့ ပြုပြင်ယူနေပါတယ် … ။ ဥစ္စာခြောက်တဲ့အကျင့်ကတော့ … တမင်ကို မပြုပြင်ဖြစ်သေးဘူး ဥစ္စာခြောက်တာနဲ့ ကပ်စေးနည်းတာမှ မတူတာပဲလေ …နော် …
ဆရာထက်ပြောသလိုပါပဲ .. သတိဆိုတာ ပိုတယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ ထုံး ၊ နှလုံးမူပြီး …. ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ် ခါးပိုက်နှိုက်ရန်က ကာကွယ်ရတော့မယ် … ။
အကိုတို့ အမတို့ ပြောတာ အားလုံးကောင်း ပါတယ်ခင်ဗျာ….ဗဟုသုတ ရပါတယ် .
ဒီနေ့ ကြားရတဲ့သတင်းအရ … ဘက်စ်ကားပေါ်မှာ အုပ်စုလိုက် ခါးပိုက်နှိုက်တဲ့ အဖွဲ့ … ၊စပယ်ယာနဲ့ အကူတစ်ယောက်ကို သဲကွင်းမှတ်တိုင်မှာ ဓါးနဲ့ထိုပြီးဆင်းပြေးသွားတဲ့အဖွဲ့ကို … ရဲတွေ ဖမ်းလိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီတဲ့ … ။
ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ .. ရဲတွေ အရပ်ဝတ်နဲ့ … ဘတ်စ်အချို့ပေါ်မှာ လိုက်စီးပြီး …. ခါးပိုက်နှိုက်ဖမ်းတဲ့ သတင်းပါပဲ … ။ ကားတိုင်းတော့မဟုတ်ပေမယ့် …ယာဉ်လိုင်းအချို့မှာ လိုက်စီးပြီး .. ဖော်ထုတ်နေပါတယ်တဲ့လေ … ။ ခါးပိုက်နှိုက်နဲ့ ရဲနဲ့က … မျက်နှာချင်းဆိုင်မတွေ့ဘူးပေမယ့် …ဘ၀ပေးကုသလိုလ်ကြောင့် …. အချင်းချင်း ဘယ်သူက ဘာဆိုတာ .. ရိပ်မိကြသတဲ့ … ရဲပါတဲ့ကားဆိုလျှင် … ခါးပိုက်နှိုက်တွေတက်စီးမိလျှင်တောင် … ကြာကြာမစီးပဲ ဆင်းပြေးပါသတဲ့ … ။
စနိုးတို့ ကတော့ ကားပေါ်စတက်တာနဲ့ နေရာကိုမလုနိုင်ဘူး ပိုက်ဆံအိတ်ကို ကိုယ့်ရင် ဘတ်ထဲပိုက်ထားလိုက်တာ ခါးပိုက် နှိုက်လည်း ခိုးရဲမှာမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ပိုက်ဆံအိတ်ကိုသာကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ဂရုစိုက်ရမယ်လေ ပါသွားမှ တော့ ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူး လေ သင်ခန်းစာယူတက်ရင်သင်ခန်းစာပါဘဲ ….